Iindaba -Umgangatho ophakamileyo weXLR Jack uMfazi weSchassis Socket
I-Zhejiang Lianzhan Electronics Co, Ltd Inikezela ngoMgangatho woMgangatho weCannon yabasetyhini iPhaneli yeChassis Mount XLR izihlanganisi zabaThumeli beB2B kunye nabaSebenzisi kwicandelo lokuxuba, iiGuitar Amps, iVidiyo yeVidiyo kwihlabathi liphela.
Ixabiso lamaPhaneli eNtaba yeXLR yeNtaba yeSinxibelelanisi esivela eLianzhan isekwe kubungakanani beOrder Order. Sinikezela ngamaxabiso aguqukayo eeJacks kunye neeHlukelo zeZixhumi ngokuxhomekeke kumanqanaba oMgangatho-Izinto ezahlukeneyo zoKhetho (iGolide yatywinwe / iSilivere).
Sinokuxhasa Isinxibelelanisi esingathath'icala kunye neeJacks zabaSasazisi nabangenisa impahla kweli. ICannon XLR Isinxibelelanisi yenye yezinto zethu zokuBetha phakathi kuLuhlu lwethu lweKhathalogu.
Ngaphandle koko, sineQela eliQeqeshayo lokuKhulisa umba omtsha ngokusekwe kwimfuno yoMthengi. SineeNjineli eziPhezulu ezi-2 zoPhuculo, ubuNjineli beMveliso ezi-3 eziNcinci, i-2 QC, i-2QA, Ukuqinisekisa ukubonelela ngoMgangatho oPhezulu woMthengi oCeliweyo. UMGANGATHO INKCUBEKO YETHU!